Wararka - Aasaaska FFU iyo Naqshadeynta Nidaamka
Waa maxay Qeybta Filter Fan?
Qaybta miiraha shaandhada ama FFU waa lagama maarmaan faafiyaha qulqulka qulqulka leh marawaxadda iyo mootada isku dhafan. Marawaxadda iyo matoorku waxay u jiraan inay ka adkaadaan cadaadiska ma guurtada ah ee gudaha ku rakiban HEPA ama ULPA filter. Tani waxay faa'iido u leedahay codsiyada dib-u-hagaajinta halka awoodda marawaxadaha ee ka imanaya hawo-hayaha aan ku filneyn in laga adkaado hoos u dhaca cadaadiska shaandhada. FFU waxay si ku habboon ugu habboon tahay dhismaha cusub halkaas oo heerarka isbeddelka hawada sare iyo jawi nadiif ah oo nadiif ah looga baahan yahay. Tan waxaa ka mid ah codsiyada sida farmasiyada isbitaalka, aagagga isku-darka daawooyinka iyo elektaroonigga yar ama xarumaha kale ee wax soo saarka xasaasiga ah. FFU sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in si deg deg ah oo fudud loogu cusbooneysiiyo kala soocida ISO qolalka si fudud iyadoo lagu darayo qeybaha miiraha shaandhada ee saqafka. Waa wax caadi ah in ISO lagu daro 1 ilaa 5 qolal nadiif ah oo loogu talagalay saqafka oo dhan in lagu daboolo unugyada miiraha marawaxadaha iyadoo la adeegsanayo FFU halkii laga heli lahaa bartamaha hawo si loo siiyo isbeddelada hawada looga baahan yahay. Cabirka hawo-hayaha si weyn ayaa loo dhimi karaa. Waxaa intaa sii dheer tiro fara badan oo FFU ah oo guuldaradii hal FFU aysan wax u dhimeynin howlaha nidaamka oo dhan.
Naqshadeynta nidaamka qolka nadiifka ah waa in la isticmaalo culeyska diidmada guud ee wadajirka ah halkaas oo FFU ay ka soo qaadato hareeraha hareeraha ka soo noqoshada guud, waxaana lagu qasan yahay xaaladdu hawo ka sameysan cutubka maaraynta hawada. Faa'iidada ugu weyn ee nidaamka guud ee FFU ee cadaadiska xun ayaa ah inay baabi'iso halista wasakhda uga guureysa gebi ahaanba saqafka meesha nadiifka ah ee hoose. Tani waxay u oggolaaneysaa nidaamka saqafka ka raqiisan oo adag in la isticmaalo. Haddii kale lagu rakibo unugyo ka yar.
FFU si toos ah ayaa looga soo duubi karaa hawo-hayaha hawada ama qalabka terminal-ka. Tani waxay ku habboon tahay barnaamijyada dib-u-habeynta halka booska laga casriyaynayo laminarrada aan filter-ka loo marin oo loo beddelayo FFU. FFU waxaa caadi ahaan lagu heli karaa saddex cabbir, 2ft x 2 ft, 2ft x 3 ft, 2 ft x 4ft waxaana loogu talagalay inay ku xirnaadaan shaashadda saqafka laga joojiyay. FFU caadi ahaan waa la cabiraa 90 ilaa 100 FPM. Baaxadda ugu caansan ee 2ft x 2 ft tani waxay u dhigantaa 480 CFM oo loogu talagalay qaabka qolka lagu beddelayo qaabka shaandhada. Isbedelada shaandhayntu waa qayb lagama maarmaan u ah dayactirka joogtada ah.
Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo FFU ah oo fududeeya isbeddelada shaandhaynta siyaabo kala duwan. Noocyada shaandhada la beddeli karo ee qolka ayaa u oggolaanaya marinka miiraha dhinaca qolka iyada oo aan wax u dhimeynin sharafta nidaamka saqafka. Qaybaha laga saari karo dhinaca qolka waxay leeyihiin muuqaal mindi isku dhafan oo ku dhexjirta shaandhada jellada si loo hubiyo xiriir la'aanta daatay. Qaybaha sare ee bedelka sare waa in laga saaraa saqafka si loo bedelo shaandhada. Miirayaasha sare ee la beddeli karo waxay leeyihiin 25% aag miirayaal badan oo u oggolaanaya heerarka socodka hawada sare.
Ikhtiyaar kale oo la fiiriyo marka la dooranayo qaybta taageere waa nooc ka mid ah mootooyinka la isticmaalo. PSC ama matoorrada nooca induction ee AC ayaa ah xulashada dhaqaale ahaan. ECM ama matoorrada DC-ga ah ee aan lahayn buraashka ayaa ah ikhtiyaarka wax-ku-oolnimada sare ee leh processor-yada yaryar ee kor u qaada oo hagaajiya waxqabadka mootada una oggolaanaya barnaamijyada gawaarida Markaad isticmaaleysid ECM waxaa jira laba barnaamij matoorro oo la heli karo. Midka hore waa socod joogto ah. Socodka joogtada ah ee barnaamijka mootada wuxuu hayaa qulqulka hawada iyada oo loo marayo qeybta miiraha shaandhada ee ka madax banaan cadaadiska ma guurtada ah sida miiraha uu xamuulka u yahay. Tani waxay ku habboon tahay naqshadeynta naqshadeynta naqshadaha caadiga ah ee caadiga ah. Barnaamijka labaad ee matoorku waa xaddiga joogtada ah. Barnaamijka mashiinka isdabajoogga joogtada ah wuxuu hayaa xajmigaas ama xoogga wareega ee mootada oo ka madax banaan cadaadiska ma guurtada ah sida miiraha uu xamuulka u yahay. Si loo ilaaliyo qulqulka hawada ee joogtada ah iyada oo loo marayo qeybta miiraha shaandhada leh oo leh barnaamij isdaba joog ah, waxaa loo baahan yahay terminal madaxbanaan oo madaxbanaan ama waalka venturi. FFU oo leh barnaamij socodka joogtada ah waa inaan si toos ah loogu xidhin aaladda madaxbanaan ee cadaadiska madaxbannaan, maxaa yeelay tani waxay keenaysaa aalado casri ah inay u dagaallamaan xakamaynta waxayna u horseedi karaan hawo qaadasho iyo waxqabad xumo.
Marka lagu daro xulashooyinka mootooyinka waxaa sidoo kale jira laba ikhtiyaarro gawaarida. Giraangiraha hore ee qalooca waa ikhtiyaarka caadiga ah waxayna ku habboon yihiin mootada EC iyo barnaamijka socodka joogtada ah. Giraangiraha gadaal gadaal u qulqulaya inkasta oo aysan ku habboonayn barnaamijka socodka socodka joogtada ah ayaa ah ikhtiyaar tamar badan oo hufan.
FFU's ayaa si isdaba joog ah u kordhay caan ahaanshahooda sababo la xiriira naqshadaynta tamarta ku habboon iyo khatarta waqtiga dhimista oo hoos u dhacda taasoo ka dhalatay nidaamka maamulida hawada baahsan. Naqshadeynta qaabdhismeedka qaababka FFU waxay u oggolaaneysaa isbeddel deg deg ah oo fudud oo lagu sameeyo kala-saaridda ISO ee qolalka nadiifka ah. FFU waxay leeyihiin astaamo iyo ikhtiyaarro badan oo waxtar leh oo u oggolaanaya u habeynta nidaamka oo dhammaystiran iyo xulashooyin kala duwan oo ikhtiyaari ah oo ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo u oggolaanaya Bilaabidda iyo hawlgelinta deg degga ah, iyo xakameyn buuxda iyo kormeer nidaamka inta lagu jiro hawlgalka.